नेपाली आकास सुरक्षित छ, व्यवहार बदलौ :महत, पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिती सदस्य
दिपक महत, सञ्चालक समिती सदस्य –नेपाल पर्यटन बोर्ड
काठमाण्डौ । ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी आङछिरीङ शेर्पा सहित ७ जनाको मृत्यु भएपछि नेपाली आकास र भिभिआईपीहरुको उडानलाई थप व्यवस्थीत बनाउन नसकिरहेका सन्दर्भ एक पछि अर्को गरी उछालिदैछ । हवाई दुर्घटनाका बखत छानबिन समिती बन्ने र प्रतिबेदन झोलामा राखेर धेरैजसो अवस्थामा मौसमी प्रभाव र भुगोललाई दोस दिएर यहाँसम्म आईपुगेको यथार्थ हो । यद्यपी आकासमा उड्नुपर्ने हवाई यातायातको सामु हाम्रो भौगोलिक धरातल बाधक बनाईएर गरिएका दुष्प्रचार कति जायज सोचनिय छ । यस अलवा मौसम परिवर्तन र पाईलटलाई दोसी बनाएर उम्कने प्रबृति पनि सँगै उठिरहँदा विश्व मानचित्रमा उत्पादित हवाई यातायातको बिश्वव्यापी उपयोग र दुर्घटनासँग नेपाली अवस्था जोड्दा नाच्न नजान्ने’ नेपाली उखानसँग मेल खाने सन्दर्भहरु उठ्लान । खैर, जेजति बहस सतहमा आएका छन, यसमा पर्यटन सम्बद्ध व्यक्तिहरुको बुझाई चै के छ त ? बुझ्ने कोशिस गरेको छु ।
प्रश्तुत छ, नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिती सदस्य तथा बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी दिपक महतसँगका केही सवाल ।
ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्यटन मन्त्री र पर्यटन व्यवसायी लगायतको टोलीको दुःखद निधन हुन पुग्यो, कसरी लिनुभएको छ ?
एकदमै अपत्यारिलो, अकल्पनिय तथा आकस्मीक रुपमा जुन घटना घट्यो, एकदमै मर्माहत बनाएको छ । यद्यपी केही सावधानी मात्रै अपनाएको भए टार्न सकिन्थ्यो की जस्तो लाग्छ । यद्यपी अब हामीसँग त्यो बिकल्प पनि सकियो ।
दुर्घटना टार्न सकिन्थ्यो भन्नुभयो, कसरी ?
काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशैभरीको आकासमा केही दिन यता पश्चिीमी बायुको प्रभाव थियो, यसको पूर्वानुमान मौसमबिज्ञहरुले नै गरेका हुन । क्षणिक मौसमको प्रभाव अनुमान गर्न नसकिएला तर यसपटक पूर्वसुचना पहिले नै प्राप्त भएको थियो । अर्को कुरा दुर्घटनाको बेलुकी आङछिरिङ जि यूरोप जाने कार्यतालिका र पर्यटनमन्त्री भोलिपल्ट जर्मनी जाने कार्यक्रमका बिच प्रतिकुल मौसमका कारण उडान गर्न नसक्ने पाईलटको जवाफमा मनोबैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने काम भएको प्रष्ट छ, किनकी पाईलटले कन्ट्रोल रुमसँग गरेका संबादमा ति कुराहरु व्यक्त भएका छन । यस्तोमा जुन हेलचेक्राई भएको छ, दुर्भाग्य त्यहीनेर सुरुवात भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । मौसम फ्रिजिङको समयमा सामान्यतया हेलिकोप्टरको तौलमा गह्रौंपना थपिने संभावना हुने बिज्ञकै कुराहरु पनि आएका छन, त्यसको बिकल्पका रुपमा ३ जनाको दरले पाथिभरा उडान क्षेत्र पार गरी दोहोर्याएर उडान गर्न सकिने अर्को संभावना थियो । यस्तोमा दुर्घटनाअघि चौहानडाँडा कार्यक्रमका बखत नै मन्त्रीले प्रतिकुल मौसमको कुरा र काठमाण्डौ जानैपर्ने बाध्यता जसरी प्रश्तुत गरेका छन, त्यसलाई कुल्चेर अगाडि बढ्नु नै दुर्घटनाको कारण बनेको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपाली आकासलाई असुरक्षित भन्दै जसरी प्रचार गरिएको छ, असुरक्षित नै हो ?
सुनेको भरमा बोलिने बोलिमा म त्यति धेरै बिश्वास गर्दिन । बिश्वमानचित्रमा नेपाल मात्रै त्यस्तो मुलुक होईन जहाँ डाँडापाखा छन । अर्को बिर्सन नहुने कुरा हवाई यातायात आकासमा उड्ने हो यसका अधिकतम उचाई सिमा हेर्दा हाम्रा पहाडहरुलाई दोस लगाउनु हास्यास्पद र अन्याय होला । सोझै भन्दा आकासमा उडाउनुपर्ने हेलिकोप्टर डाँडामा लगेर ठोक्काउने कुरा भद्दा मजाक बाहेक केही होईन । अहिलेको दुर्घटना डाँडापाखामा ठोकिएर भएको होईन, मौसमकै कुरा गर्दा पनि चक्र अनुसार सबै मुलुकमा थोरबहुत परिवर्तन देखापर्छ नै । यस्तोमा भिजिबल अवस्थामा उडान भर्नुपर्ने हेलिकोप्टर यसका सिमालाई कुल्चेर मनोबैज्ञानिक उत्तेजनाले दुर्घटना निश्चीत छ । अर्को कुरा सुधारको पाटोको रुपमा डबल इन्जिनका हेलिकोप्टरको प्रयोग हुनु जरुरी छ, नपुगेको भए थप्नुपर्छ । प्राबिधीक कमजोरीलाई हटाएर यथोचित नियम पालना गरे धेरै हदसम्म उडान सुरक्षित छ । नेपाली आकास अरु मुलुकको जस्तै कञ्चन छ, यसलाई दोस नदिउँ ।
पर्यटन बोर्ड र नेपाल सरकारको भुमिका चै कस्तो हुनुपर्ला ?
नेपाली पर्यटन बजारको खोजी, प्रवद्र्धन, पर्यटकको संख्या बढाउन बिभिन्न किसिमका कार्यक्रम गर्ने काम पर्यटन बोर्डले गर्छ । नेपाल सरकारको हकमा नेपाली आकासको जानकारी, नियमन, दुर्घटना तयारी लगायतका पाटोमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । दुर्घटना अहिले मात्र भएको होईन, तपाईकै जिबनकालमा पनि ठुला दुर्घटनाको स्थीति देखेकै हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म प्रतिबेदन दराजमा राखेर फेसबुके जमातले सुनेका भरमा नेपाली आकास असुरक्षित भनेर हल्ला गर्नु चै बेईमानी हो । एकचोटी पाईलट भईसकेपछि जिबनभर बिश्वास गर्ने परिपाटी त्यागेर बेलाबखतमा उसको क्षमतामाथि जाँच गरिनुपर्छ । तर उड्ययन बिभागका व्यक्तिलाई सोध्नुभयो भने सबै ठिक छ भनेर दुर्घटना गराउने पाईलटको मृत्युपछि दोस उमाथि थुपार्ने या त मौसमको प्रतिकुलताको रटान लगाईन्छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ । अन्याथा व्याधा र भँगेराको कथा दोहोरि रहने दुःखद स्थीति श्रृजना हुन सक्छ ।